Sompirana Tamin’ny Adim-Panafahan’i Bangladesh any amin’ny Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Sompirana Tamin'ny Adim-Panafahan'i Bangladesh any amin'ny Bilaogy
Voadika ny 09 Janoary 2018 14:30 GMT
1) Ny adim-panafahana an'i Bangladesh: Nipoitra ny tontolon'ny bilaogy tamin'ny fankalazana ny Androm-Pandresen‘i Bangladesh (Pakistana Atsinanana teo aloha ).
Ny 16 Desambra 1971, nitolo-batana tany amin'ny komandin'ny Tafika Indiana sy ireo mpitolona ho an'ny fanafahana Bangladeshita tao Dhaka ireo tafika mpibodo Pakistaney taorian'ny ady mihoso-drà ho amin'ny fahaleovantenan'ny firenena (Bangladesh) naharitra sivy volana. Nilaza amim-pahasahiana i Bangladesh fa tsy mila an'i Pakistan, izay natsangana noho ny finoana ary mbola miraikitra amin'izany. Nanome ny ràny ho an'ny demaokrasia sy ny [fitondrana] laika ny Bangladeshita, mba ho afaka amin'ny fampahoriana sy hanana ny maha-izy azy manokana ho an'ny kolontsaina Bengali nijoro an'arivony taona.
Saingy novidiana lafo ny fandresena ny Pakistaney. Tsy hanadino ny Bangladeshita fa teo anelanelan'ny 25 Martsa sy 16 Desambra 1971, tombanana ho 3 tapitrisa ireo Bengaly novonoin'ny tafika Pakistaney sy ireo mpiara-miasa aminy, vehivavy 200000 no naolana ary 10 tapitrisa no nafindra toerana. Ity no fandripahana ratsy indrindra taorian'ny Ady Lehibe Faharoa.
Tezitra mafy i Subhan satria telo amby efapolo taona taty aoriana, mbola tsy nahita na olona iray tamin'ireo tafika mpibodo na ny mpiara-miasa amin'izy ireo niakatra fitsarana ireo lasibatry ny fandripahana. Maro amin'ireo Pakistaney taranaka taty aoriana no tsy mahalala momba ny heloka nataon'ireo razambeny. Nanararaotra ny famotsoran-keloka faobe ny sasany tamin'ireo mpiara-miasa ao Bangladesh ary nanjary lasa mpanao lalàna mihitsy ao amin'ny fitondrana ankehitriny. Mihevitra ny ‘Golmal Press’ fa ao anatin'ny ady faharoa ho an'ny fahaleovantena i Bangladesh, miezaka miady amin'ireo Islamista mahery fihetsika satria tsy misy maha samihafa azy ireo tamin'ny Razakars (mpiara-miasa) tamin'ny tafika Pakistaney.
Na izany aza, mihevitra i Mezba fa tsy misy antony idarodarohana an'i Pakistana amin'izao fotoana izao ary ny tokony ho teny filamatr'i Bangladesh dia hoe “Mamela Heloka fa Tsy Manadino”.
Razib kosa miresaka momba ny hevi-diso eo amin'ireo Bangladeshita taranaka vaovao mikasika ny fandraisana anjaran'i India tamin'ny adim-panafahana taona 1971 ary mihevitra izy fa nanadino nanome fanajana ho an'ny Indiana ny Bangladeshita.
2) Bangladesh no tsara indrindra: Namoaka “sketch” nifarimbonana manome aingam-panahy momba ny antony mahatonga azy miteny hoe “Bangladesh no tsara indrindraa” i Adda. Mampalahelo fa aseho amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny lohatenim-baovao momba ny tondra-drano, ny fahantrana sy ny tantara hafa manintona fotsiny i Bangladesh. Tsy mba miseho amin'ny fampahalalam-baovao ny tsara indrindra ao Bangladesh.
3) Ny fibilaogina amin'ny teny Bangla: ‘Namoaka fitaovana fibilaogina voalohany amin'ny teny Bangla “Bandh Bhanger Awaj ny “Somewhere in blog’, mpikambana ao amin'ny orinasan'ny rindrambaiko ‘ Somewhere in’. Antenaina fa hanampy amin'ny fitomboan'ireo bilaogera Bengladeshita izany, izay hahazo aina kokoa amin'ny fibilaogina amin'ny tenin-drenin'izy ireo.